Nanao izay mety ny fitondrana Ataovy mangarahara ny kaonty…
Nanao izay nety ny rehetra, ary nanao ezaka lehibe ny fitondrana Rajoelina na tamin’ny fanomanana na ny fikarakarana fa iny aloha ny vokatra. Isan-karazany, isan-tsokajiny,
niainga tamina olon-tsotra, fianakaviana, fikambanana, orinasa, vondron’orinasa ny fanampiana sy fanohanana ny ekipam-pirenena. Fotoana nisinisy ihany ireo mpitondra fanjakana no tany Egipta niara-dalana tamin’ny Barea. Zava-dehibe sy mendri-piderana ny ezaka fanohanana ny ekipam-pirenena, ary mila tohizana. Na izany aza, dia rariny sy hitsiny kosa angamba raha mba atao mazava ny kaonty. Ny saran-dalan’ny fiaramanidina izao iza avy marina no tonga tany Egipta ? Tamin’ny fomba ahoana marina ? Re ihany mantsy ny fimenomenomana. Nisy vola namenoana ny banga ve tao sa ahoana ? Tahaka ny inona sy manakory marina ny fanampiana ho an’ny mpilalao, ny mpanazatra sy ny mpiara-miasa aminy sy ny fankasitrahana azy ireo tamin’ny ezaka goavana vita ? Inona no tena asan’ny “Comité de normalisation tao anatin’iny CAN 2019 iny ? Naharitra tany Egypta ny minisitry ny fanatanjahantena, inoana fa tsy nandamina ny momba ny Barea satria efa am-pelatanan’ny CAF ny momba izany ho an’ny ekipa tsirairay. Nandrindra ny fahatongavan’ny Malagasy mpanohana ve sa inona marina ? Nanambara sy nilaza matetika ny filoha Rajoelina fa mangarahara ny fitantanana ny firenena sy ny asan’ny fitondram-panjakana, ka andrasana izany ny momba iny CAN nandraisan’ny Barea anjara iny. Mila tohizana kosa ny fientanam-pirenena lehibe naterany.